Dhoofinta Indhoolayaasha Indhoolayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha | ETEX
Waxaan soo saarnaa indhooleyaal indhoolayaal kala duwan. Nooca:
Ind Indho-indhoolayaasha Wood Woodetieti, Bamboo Kuwa indha-indheeya
Ind Indhoolaha Aluminium Venetian Indhoole
Waxaa jira noocyo kala duwan oo nidaamyo ah oo loogu habboonaan karo dadka indha la 'hilibka indhaha loo isticmaalo:
System Nidaamka xargaha
System Nidaamka Mashiinka
Indhoolayaasha Venetian, oo mararka qaar loo yaqaanno indhoolayaasha slat ama indhooleyaasha tooska ah, waxay door weyn ka qaataan daahyada waxayna abuuri karaan muuqaal casri ah oo casri ah gudaha gurigaaga. Waxaan leenahay noocyo cajiib ah oo indhoolayaal ah oo alwaax ku shaqeeya, indhoolayaal indhoolayaal aluminium ah, iyo faashad alwaax ah oo aan kaliya u keenin qoto dheer iyo diirimaad qolkaaga qurxinta, laakiin waxay kaa caawinayaan inaad si fudud ula wareegto heerarka iftiinka iyo sirta si sahlan. Indhoolayaasha cadceedda cad ee indhaha ka samaysan waa qaar ka mid ah indhoolayaasha indhoolayaasha ah ee aad iibsan karto, adigoo si wanaagsan ula shaqeynaya nidaam kasta oo midab ama qaab qurxin ah. Indhoolayaasha indhooleyaasha madow waxay badanaa si isle'eg ugu shaqeeyaan meel waliba sidoo kale. Si aad u eegto casriyeysan oo aad u dareento, sahamiso indhooladeena hilib aluminium kala duwan. Waxyaabaha adag waxay u sujuudi doonaan ama miridhidoon doonaan, iyagoo indhoolayaasha ka dhigaya kuwo ku habboon jikada iyo musqusha. Haddii aad doorbidi lahayd muuqaalka indhoolaha qoryaha alwaaxa ah, laakiin aad ugu baahan tahay wax adag oo xiran ama aad uga qiimo badan, ka baadi goobada indhoolayaasha kala duwan ee indha-shareerka. Iyagu waa kuwa ugu wanaagsan labada adduun!
Haddii aad raadineyso codad dhexdhexaad ah sida indhooleyaal cad oo alwaax ah ama hilib jilicsan oo ku habboon qurxinta miyir-qabka ah, ama waxaad raadineysaa inaad sameyso bayaan cad oo ay ka muuqato indhoolayaal daaqad alwaax ah oo leh dhawaaqyo ifaya, waxaad hubtaa inaad ka hesho kulankaaga ugu fiican Dunelm.
Indhooleyaasheena indhoolayaasha ah ee loo yaqaan 'venetian blind' ayaa laga heli karaa cabbirro fara badan oo kala duwan oo ku habboon noocyo daaqado kala duwan oo ay fududahay in la rakibo, Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay daaqado cabbir aan caadi ahayn, ama si fudud aad u rabto qaar ka mid ah indhoolayaal dheelitiran oo dhammaystiran oo ku habboon qaabkaaga iyo faahfaahintaada
Indho-indheeyeyaasha Venetian ayaa u adeegsan kara kuna habboon hoteelka, qurxinta guriga, kafateeriyada, xafiisyada, dukaamada, guryaha iyo meheradaha dhismaha ganacsiga.
Hore: Dharka Indhoolayaasha Tooska ah
Xiga: Readymade Vightical Blind